Nei Uine Kashoma Fomu Minda Inotyaira Shanduko | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 16, 2012 Chipiri, Gunyana 16, 2012 Jenn Lisak Golding
Yedu yakanakisa tekinoroji inotsigira,Formstack , yaita tsvagiridzo yakawanda pa kugadzira mamwe shanduko uchishandisa mafomu. Takashanda pamwechete mukunyora yakanakisa tsvagiridzo inoratidza izvozvo mashoma fomu masimi anotyaira shanduko. Muchokwadi, takaona kuti iwo mwero wakakwana wekushandurwa kunoitika kana huwandu hwenzvimbo dzinoshandiswa nemushandisi kuzadza dziri mbiri kana nhatu.
Iyo infographic inopawo mamwe matipi ekuvandudza yako fomu dhizaini kutyaira shanduko. Mafomu ako akagadziridzwa pamidziyo yese? Fonti yacho yakakura zvakakwana here? Iyi mibvunzo iwe yaunofanirwa kunge uchizvibvunza iwe kana iwe uri kutsvaga kuti ugadzire fomu rinoshanda.
Unofungei? Unotambura ne mangani mafomu mafomu unofanira kuva?
Tags: kupindukakutendeuka optimizationfomu mindanezvimiroformstacknhamba yeminda
Gumiguru 16, 2012 na1: 01 PM
Kunaka infography, unoziva here kana mhedzisiro dzakasiyana muB2B mawebhusaiti achienzaniswa neB2C?. Ndiri kureva kuti vashandisi veB2B vanowanzo nyore kuzadza mafomu?
Gumiguru 16, 2012 na4: 24 PM
Iyo data yakapihwa mune ino inonyanya kubata neB2B mawebhusaiti. Nekudaro, isu tichiri kuongorora data kubva kuB2B maringe neB2C, pakanga pasina toni yemusiyano mumhedzisiro, kunze kwenyaya yeecommerce. Dai paive nesarudzo yekuti mushandisi apinde semuenzi pachinzvimbo chekupa yavo info uye nekugadzira account, ivo vanonyatso pinda semuenzi pachinzvimbo. Ini ndinofunga, zvichibva pane zvandakaona neFormstack uye semushandisi, kuti kufungidzira kune musoro kufunga kuti vashandisi veB2B vanowanzo tenderera kuzadza mafomu.
Gumiguru 17, 2012 pa 4:38 AM